कहिले खुल्छन् विद्यालय ? यति गतेबाट खुल्दै, सरकारले दियो यस्तो निर्देशन – Paluwa Khabar
कहिले खुल्छन् विद्यालय ? यति गतेबाट खुल्दै, सरकारले दियो यस्तो निर्देशन
साउन १, २०७८ शुक्रबार 123
शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिना दिन वित्न लागिसक्यो । तर लाखौं विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । शहरी क्षेत्रमा अनलाइन लगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा जोड्ने प्रयास भइरहे पनि ग्रामिण क्षेत्रमा त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
क’ भिड–१९ को दोस्रो लहर केही कम भए पनि अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । अहिले पनि दैनिक २ हजार आसपासमा नयाँ स’ क्रमित भेटिने गरेको छ भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले तेस्रो लहर आउन सक्ने चे’ तावनी पनि दिएका छन् ।
को’ रोना म’ हामारीका करण शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा पनि मुस्किलले केही साता विद्यालय खुलेको थियो । दोस्रो लहर आएपछि मध्य वैशाखबाट दुई महिना देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइयो ।
पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । होटल, रेष्टुराँ, सार्वजनिक यातायात सबै खुलेका छन् । तर विद्यालयहरु कहिलेबाट र कसरी खोल्ने कुनै टुंगो छैन ।
विद्यालय सञ्चालन तथा बन्दको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि केन्द्र सरकारले नै निर्णय गर्दै आएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षामा नै जोड दिएको छ । विद्यालय खोल्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाका साथै ठूला शहरहरुमा साउनसम्म विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठनपाठन सम्भव नभएको स्थानीय तहका अधिकारीहरु बताउँछन् । एकाध स्थानीय तहले भने साउन १ बाट पठनपाठन सुरु गर्ने बताएका छन् ।
Prevके फेरी साउन २ गतेपछि पुन क’ डा नि’ षेधाज्ञा लाग्दैछ त ? भर्खरै सरकारबाट आयो यस्तो जानकारी, हेर्नुहोस्
Nextप्रधानमन्त्री देउवाद्वारा कुलमान घिसिङ्गलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भर्खरै आयो यस्तो जानकारी हेर्नुहोस्
सपनामा आएर मदन भण्डारीले विद्यालाई भन्नुभो– सबै घ’ टना अमर लामालाई थाहा छ